Maanta, warbaahinta bulshada iyo qalabka isgaarsiinta iyo qaababka isgaarsiinta ayaa si aad ah u kala duwanaa. Laga soo bilaabo kombuyuutar ilaa tablets, taleefannada casriga ah, saacadaha smart iyo qalab kale oo badan ayaa loo adeegsaday isgaarsiinta. Natiijo ahaan, codsiyada bulshada iyo isgaarsiinta ayaa loo soo saaray mid kasta oo ka mid ah aaladahan. Si kastaba ha ahaatee, codsiyo badan ayaa la sii daayay oo aynaan garanayn sida loo isticmaalo qaar badan oo iyaga ka mid ah.
Maqaalka maanta waxaan ku siin doonaa macluumaad ku saabsan website ka kooban macluumaadka ku saabsan kombayutarada, casriga ah iyo tablets, isgaarsiinta codsiyada, whatsapp, twitter, facebook, instagram iyo codsiyada la mid ah. Magaca goobta waa enterle.com
U shaqaynta sida baraha bulshada iyo tignoolajiyada blog https://www.enterle.com/ Websaydhku waxa uu ka kooban yahay macluumaad ku saabsan codsiyada warbaahinta bulshada, codsiyada mobilada, gaar ahaan isgaadhsiinta iyo codsiyada is dhexgalka.
Waxaan qiyaasaynaa in ku dhawaad ​​dhammaanteen aan leenahay ugu yaraan hal xubin oo warbaahinta bulshada ah. Tusaale ahaan, waxaan qiyaasaynaa inaan isticmaaleyno ugu yaraan mid ka mid ah codsiyada sida whatsappka ama facebook ama twitter, zoom, telegram, beep, instagram iyo wixii la mid ah.
Dabcan, sida aad ogtahay, codsiyadan si joogto ah ayaa loo cusbooneysiiyaa, sifooyin cusub ayaa lagu daraa, laakiin sifooyin cusub iyo kala duwanaansho caan ah lama yaqaan isticmaalayaasha badan. Isticmaalayaal badan oo warbaahinta bulshada iyo isgaadhsiinta isticmaala ayaa loo yaqaanaa isticmaalayaasha caadiga ah, celceliska isticmaalayaasha kuwaas oo aan dhaafin shaqooyinka aasaasiga ah. Tusaale ahaan, imisa naga mid ah ayaa naqaan sida loogu qoro qoraalka geesinimada leh ee whatsapp messengerka? Intee innaga mid ah ayaa naqaan sida farta farta loogu qoro ama wax loogu qoro whatsappka? Waa kuwan sida loo isticmaalo tan iyo shaqooyinka la midka ah, tabaha iyo tabaha https://www.enterle.com ku sugaya goobta.
Haddii aad rabto, aan ka hadalno tabaha waxtarka leh ee ku jira bogga enterle.com oo ku tax mawduucyada xiisaha leh ee hoose.
Waa maxay calaamadda xuquuqda lahaanshaha, sida loo sameeyo, sida loo qoro calaamadda xuquuqda daabacaada ee taleefanka kumbuyuutarka
Markaad gujiso ciwaanka sare, waxaad baran kartaa sida loo sameeyo calaamadda xuquuqda daabacaada kumbuyuutarka kumbuyuutarka ama taleefanka casriga ah, iyo sida loo sameeyo calaamadda xuquuqda daabacaada kumbuyuutarka kumbuyuutarka ama taleefanka casriga ah.
Sida loo qoro hoosta kumbuyuutarka iyo taleefanka
Markaad gujiso isku xirka kore, waxaad baran kartaa sida meesha looga saaro dhibcaha hoosta ee kiiboodhka. Gaar ahaan, sida hoos-u-dhaca, oo si ballaaran loo isticmaalo si loo abuuro magac adeegsad gaar ah, loogu qori karo casriga casriga ah ayaa sidoo kale laga heli karaa maqaalka su'aasha.
Sida loo damiyo markii ugu dambeysay ee lagu arkay Instagram, dami dhaqdhaqaaqa Instagram
Isku xirka kore, macluumaadka waxaa lagu bixiyaa muuqaal xiiso leh gaar ahaan isticmaaleyaasha Instagram ee aan rabin in waqtigooda la ogaado oo ay arkaan kuwa kale. Sida loo sameeyo Instagram markii ugu dambeysay ee la arko ama xiritaanka dhaqdhaqaaqa Instagram ayaa sidoo kale lagu sharaxay tallaabo tallaabo maqaalkan.
Hababka si qarsoodi ah loogu eego sheekooyinka instagram, daawashada sheekooyinka si qarsoodi ah
Hadii aad gujiso linkiga kore, maqaalka kaa hor imaanaya waxa uu kuu sharaxayaa sida aad u eegi karto sheekooyinka dadka aad raacdo adigoon raad ka tagin. Si kale haddii loo dhigo, waxaad dooneysaa inaad daawato sheeko qofeed oo Instagram ah, laakiin qofka sheekada la wadaagaya waa inuusan kugu arkin liiska taageerayaasha sheekada, si uusan u ogaan inaad aragtay sheekadaas. Taasi waa dhab ahaan waxa aad raadineyso, maqaalkani wuxuu sameyn doonaa khiyaamada.
Sidee sawir loogaga qaadaa fiidyowga taleefanka?
Haddii aad rabto in aad ka hesho muuqaal weli fiidiyoow ah oo ku jira taleefanka, maqaalkan adigaa leh. Waxaad kaliya riix kartaa xiriirka sare.
Goobta Nick nulma, goobaha naanaysta ee naanaysta
Haddii aad raadinayso naanays, magacyo adeegsad, naaneysyo loo isticmaali karo xisaabaadka ciyaaraha, xisaabaadka warbaahinta bulshada ama portal kasta, aad u fiican, cajiib ah, quruxsan, xiiso leh iyo goobo naaneysyo kala duwan ayaa la isugu keenay maqaalkan. Goobaha naaneyska ee quruxda badan ayaa la isugu geeyay maqaalkan si aadan ugu dhibin raadinta waxba.
Sidee looga helaa xisaabta instagram lambarka taleefanka?
Ugu dambeyntii, mowduuca ku saabsan sida looga heli karo akoon insta lambarka taleefanka, kaas oo ah mowduuc ay dadka isticmaala Instagram had iyo jeer weydiiyaan, ayaa sidoo kale lagu maamulay oo sharaxay goobta enterle.com. Haddii uu jiro qof xiiseeya, dhagsii halkan si aad u akhrido una fahanto 🙂
# Waa maxay calaamadda xuquuqda lahaanshaha, sida loo sameeyo, sida loo qoro calaamadda xuquuqda daabacaada ee taleefanka kumbuyuutarka
# Sida loo qoro hoosta kumbuyuutarka iyo taleefanka
# Sida loo damiyo markii ugu dambeysay ee lagu arkay Instagram, dami dhaqdhaqaaqa Instagram
# Hababka si qarsoodi ah loogu eego sheekooyinka instagram, daawashada sheekooyinka si qarsoodi ah
# Sidee sawir loogaga qaadaa fiidyowga taleefanka?
# Goobta Nick nulma, goobaha naanaysta ee naanaysta
# Sidee looga helaa xisaabta instagram lambarka taleefanka?